Meitu, ngwa onyonyo nke na-ezuru ohi data gi naanị Akụkọ akụrụngwa
Meitu, ngwa foto nke na - ezuru data gị naanị
Miguel Hernandez | | android, General, Noticias
Anyị na-alaghachi na gam akporo na obere ma ọ bụ obere karịa otu nsogbu dị ka mgbe niile. Nchebe bu oru nke gam akporo gam akporo na agbanyeghi obi abua, ma taa nke ikpeazu nke ihere ahu abia. Ma ọ bụ na Playlọ Ahịa Google Play bụ mgbe otu n'ime isi mmalite ndị ama ama nke nje nke sistemụ arụmọrụ Google. Taa, anyi choro ka anyi mata banyere anyi Meitu, ngwa nyocha ihe osise nke nwere ike iyi ihe na-atọ ụtọ, mana naanị ebumnuche ya bụ ịnweta data niile site na ngwaọrụ gị na ịzụ ahịa na ha. Ọ bụrụ n ’ị wụnye Meitu, ewe karịa sekọnd iri iji hichapụ ya.
Nke a ngwa zoro n'azụ a foto nyo nchịkọta akụkọ na-aghọ nnọọ-ewu ewu na China na gafere ya ala. Agbanyeghị, ngwa ahụ nwere malware nke nwere ike ijikwa njikwa ngwaọrụ gam akporo anyị. N'ụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na ha nwere ike ịnweta ngwaọrụ ahụ, kamakwa na nọmba ekwentị anyị, okwuntughe anyi ji na Facebook rue ulo oba anyi ... Na nkenke, ọdachi maka nchekwa nke nwere ike ibute nnukwu nsogbu naanị maka iji ngwa, ọ dịbeghị mfe ikpughe ọtụtụ narị nde ndị ọrụ.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ dị ka ngwa ahụ adịbeghị ewu ewu, agbanyeghị, nke a bụ ozi niile sitere na ngwaọrụ anyị nke ngwa ahụ na-eziga na sava na China:
Kedu ihe dị ka ezigbo ọdachi na nkenke. Ya mere, ị kwesịrị ị na-atụle tufuo nke ngwa, na-agbanwe agbanwe niile okwuntughe nke ngwa na i tinye site na ngwaọrụ gị na na nwere ike imebi nzuzo gị na ikekwe ọbụna weghachi sistemụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Meitu, ngwa foto nke na - ezuru data gị naanị
Nwere ike ịkwụsị iji "na nke ahụ bụ ihe" catchphrase?
Ejiri m ya na iOS.
Ọ bụ otu ihe ahụ na iphone?
The umpteenth leaked ekpe nke Samsung Galaxy S8
The Honor 8 amalite imelite na gam akporo 7.0 Nougat